Neymar oo iska hilmaamay magacyada Messi iyo Ronaldo xili uu ka hadlaayay …… – Gool FM
Ronaldo oo sheegay waqtigii ugu adkaa xirfadiisa & xilliga uu qorsheenayo inuu kaga fariisto kubadda cagta
Maxey Tahay waxa uu ku fikirayo tababare Klopp, kaddib marka uu dhamaado heshiiskiisa Liverpool??
Neymar oo iska hilmaamay magacyada Messi iyo Ronaldo xili uu ka hadlaayay ……
Liibaan Fantastic April 19, 2018
(Paris) 19 Abriil 2018 Xiddiga reer Brazil ee Neymar ayaa iska hilmaamay magacyada Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo xili uu ka hadlayay ciyaartoyda la filayo inay qaab ciyaareedka fiican ku soo bandhigaan koobka adduunka.
Neymar ayaa xusay ciyaartoy ay ka mid yihiin Mohamed Salah, Eden Hazard, Philippe Coutinho, Gabriel Jesus iyo Kevin De Bruyne.
Laakiin waxaa la is waydiiyay sababta uu uga tagay ciyaartoyda haatan ugu fiican adduunka ee Lionel Messi oo ay saaxiibo ku ahaayeen Barcelona iyo Ronaldo.
“Waxaan rumaysanahay Coutinho iyo Gabriel Jesus inay noqon karaan kuwo laga sheekeeyo, waxaan rajaynayaa in Brazil darteed ay sidaas u sameeyaan” ayuu yiro Neymar oo ka hadlay ciyaartoyda wax qabadka fiican laga sugayo inay ku soo bandhigaan koobka adduunka.
“Mohamed Salah ma ahan laacib ka mid ah xulkeyga laakiin waxaa suurogal ah inuu soo bandhigo qaab ciyaareed fiican, waxaa jira kuwo kale oo isaga la mid ah sida Kevin De Bruyne iyo Eden Hazard oo matalaya xulka Belgium iyo Suarez oo matalaya xulka Uruguay”.
Taariikhda ciyaaryahanka kooxda Heegan Cumar Gahtaani